Amagundane athembekile namakhibhodi wokusebenza ngocingo, ingabe kufanelekile? | Izindaba zamagajethi
El ngocingo sekuyinsakavukela yemisebenzi eminingi namuhla, empeleni, kufanele ngabe sibeka phambili le ndlela yokusebenza ngaphezu kwazo zonke ezinye lapho kungenzeka khona. Kodwa-ke, abasebenzi abaningi bebengakulungele ukubhekana nethuba lokusungula umsebenzi ekhaya.
Izesekeli zamakhompiyutha seziyinto ebaluleke kakhulu uma kukhulunywa ngokusisiza osukwini lwethu lokusebenza, yingakho kwa-Actualidad Gadget muva nje siletha izincomo ezinhle ezigxile kulo mkhakha. Sikulethela ukuhlaziywa kwamakhibhodi weTrust namagundane ukuze wazi ukuthi iziphi ezifanelana nezidingo zakho.
1 Ikhibhodi ye-ODY nepakethe yegundane
2 Igundane elingenantambo le-Ozaa
Ikhibhodi ye-ODY nepakethe yegundane
Into elula ukubheja njalo kukhibhodi nepakethe yegundane esebenza "ngesandla" futhi izivumelanisa ngokuzenzakalela. Ngakho-ke, uma uzokhweza okukodwa isethaphu yomsebenzi wehhovisi ezishintshayo ekhaya, la maphekhi ahamba phambili.
Imikhiqizo eminingi enjengeLogitech, iTrust noma iGenius inikeza lolu hlobo lwe-combo enamakhibhodi nezimpuku. Iseluleko sethu ukuthi ngokuqina uhlala njalo kwimikhiqizo eyenziwe ngopulasitiki omnyama futhi njengokukhanya ngangokunokwenzeka.
Kulokhu sigxila kwimodeli ye-ODY Trust, ikhibhodi negundane eline-system ethule ebaluleke kakhulu ekusebenzeni ngocingo. Endlini yethu sizodinga ukuthula okwengeziwe ngoba endaweni ecindezelwe kakhulu kunokujwayelekile kufanele senze imisebenzi yethu futhi sigweme ukuphazamisa abantu esihlala nabo noma amalungu omndeni.
Kokubili igundane nekhibhodi kulokhu kunezinkinobho nokhiye be-membrane buthule. Ngemuva kokuhlolwa kwethu kufanele sisho ukuthi ikhibhodi ithule ikakhulukazi, noma kunjalo, kungenziwa akuvamile kumsebenzisi ojwayelekile ngenxa yokuntuleka kwempendulo esingakubona lapho sibacindezela.
Thenga i-Trust keyboard nekhibhodi yegundane ngama-euro angu-24,99 kuphela
Ngokuqondene nekhibhodi, Sinezinkinobho ezi-13 ezilungiselelwe ngaphambili zombili i-Microsoft Office nokuphathwa kwe-multimedia. Ngokusobala, lekhibhodi, njengabo bonke labo abagxile ekusebenzeni ngocingo, inekhibhodi yezinombolo enezinqamuleli nokukhiya. Ngaphezulu kwesokudla sinamalambu amathathu e-LED lokho kuzokhombisa ukwenziwa okusebenzayo.
Ikhibhodi, ngokwengxenye yayo, futhi iyamelana nokuchitheka, okungukuthi, akufanele sikhathazeke uma siwisa inkomishi yamanzi noma ikhofi kuyo, noma ngabe ngezizathu ezisobala asikwazanga ukuhlola lesi sici.
Kokubili ikhibhodi negundane kuxhunywe echwebeni elifanayo le-USB. Endabeni yegundane, inengubo yenjoloba ezinhlangothini yokunethezeka okukhulu nokuslayida okungahambi kahle. Inkinobho ephezulu ukuphatha ijubane lesikhombi, yebo, siphuthelwa izinkinobho eziseceleni zokufinyelela ngokushesha.
Ngemuva, ikhibhodi inohlelo lokuphakama, kepha ngincoma ukuthi uyisebenzise kumodi "eyisicaba" njalo ukugwema izinhlungu ezihlakaleni esihlangabezane nazo. Ngaphandle kwalokho, ikhibhodi inesakhiwo esihle inqobo nje uma ujwayela ukuthinta kwayo nokumelana nayo.
Lekhibhodi negundane ODY ngu-Trust iyahambisana neWindows ne-MacOS ne-Chrome OS, ngakho-ke ngokujwayelekile ngeke sibe nezinkinga eziningi ekusetshenzisweni kwansuku zonke. Intengo enconyiwe yalo mkhiqizo ngama-euro angu-24,99, ungayithenga ngentengo engcono kakhulu ku-Amazon ku Lesi sixhumanisi.
Igundane elingenantambo le-Ozaa
Manje sikhuluma ngegundane, isikhungo sesibili sokulawula ikhompyutha yethu, kulokhu imodeli U-Ozaa de Ithemba. Ngokusobala, sikuthola kunokufana okunengqondo kwamanye amagundane asezingeni eliphezulu avela ezinkampanini ezithile ezincintisanayo, into engeyona neze iphuzu elibi, ikakhulukazi uma sibheka intengo.
Leli gundane Hlanganisa futhi udlale futhi inomamukeli wesiginali we-USB, okuyi-theory ehlanganisa kuze kufike kumamitha ayi-10, into esingeke siyihlole, ngoba besingeke sisibone isikrini kuleso simo. Ayinayo i-Bluetooth nanoma yiluphi olunye uhlobo lobuchwepheshe obungenazintambo, ngakho-ke uzobe uhlala echwebeni le-USB.
Inaphezulu kwe- a Inkomba yebhethri i-LED okuzocwayiza ngokubomvu. Igundane liyangena "Imodi yokulala" ukonga ibhethri ngokuzenzekelayo, futhi "izovuka" ngokucindezela noma iyiphi inkinobho noma wenze ukunyakaza okungazelelwe. Ngaphandle kwakho konke lokhu, okugqamayo ngukuthi sithola ibhethri le-lithium elishajekayo kuyo.
Njengokhibhodi nekhibhodi yegundane esikhulume ngayo phambilini, kulokhu sithola izinkinobho ezithulisiwe kuzo zonke izimo. Yenziwe ngepulasitiki ngokuphelele ngemininingwane ethile emincane ku-aluminium, izinhlangothi zenziwe nge-silicone yenjoloba ukwenza ngcono ukubambelela.
Ngokusobala, ingumkhiqizo okhanyayo ngenxa yepulasitiki eyenziwayo, kepha-ke, mina uqobo ngithola izinkinobho zayo eziseceleni zilusizo kakhulu, lapho sizokwazi khona ukuzulazula «emuva» no «ngokulandelayo» kanye nesondo eliseceleni ukuze sikwazi ukuzulazula ngaphezulu ngokunethezeka ngemibhalo. Sekukonke, izinkinobho eziyisithupha zokuthuthukisa umkhiqizo.
Singayithenga ngemibala emithathu ehlukene, oluhlaza okwesibhakabhaka, omnyama nomhlophe. Njengoba ukwazi ukubona, iyunithi esilivivinyile ekuhlaziyweni kwethu ilele elimhlophe, yize kufanele ngisho ukuthi okuluhlaza okwesibhakabhaka okuhlaza okotshani mhlawumbe kukhanga kakhulu, kepha ngithatha ithuba ukukhombisa ukuthi kufanele ngaso sonke isikhathi siye kumbala omnyama uma lokhu esikufunayo kungukuqina nokuhlanzeka.
Asinakho ukulinganisela okuthile maqondana nempilo yebhethri, ngesikhathi sokuhlolwa kwethu isikhathi esingaphezu kwesonto asizange sidinge ukuyikhokhisa. Isisindo esiphelele singaphezu nje kuka-100 amagremu, ngakho-ke kunethezekile, futhi isebenza ngokuphelele kuzo zombili i-Chrome OS neWindows ne-macOS.
Le gundane libiza cishe ama-euro angama-49,99, noma kunjalo, okwamanje likwi- unikele ku-Amazon kuyunithi yayo emnyama ngama-euro angu-39,99 kuphela, okusho ukuthi isephulelo esingu-20%. Ungayithenga NGALESI XHUMANA ngentengo engcono nangazo zonke iziqinisekiso.
Lokhu kube yizincomo zethu ngemuva kokuhlolwa kwemikhiqizo yeTrust yokusebenza ngocingo, siyethemba ukuthi manje usunombono ocacile wokuthi ungahlangana kanjani umsebenzi ekhaya ngaphandle komzamo omkhulu futhi nemikhiqizo esezingeni elifanele, ulindeleni?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Amagundane athembekile namakhibhodi wokusebenza ngocingo, ingabe kufanelekile?